Waa maxay qiimaha dhalashada Sweden? | Somaliska
Wasiirka isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag ayaa isbuucaan ku dhawaaqay in ay sameynayaan baaritaan ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa qiimaha dhalashada Sweden isla markaana loo qeexi lahaa waxa loogu yeero Swedishnimo.
“Markii qof u soo haajiro wadankeena waxaan dooneynaa in aan u dirno fariin muhiim ah, waan kuu baahanahay, waa in aad shaqo heshaa oo aad luuqada barataa. Muhiimadu waa in soo galootigu ay dareemaan in ay bulshada ka midyihiin oo ay Swedish noqdaan” ayuu yiri wasiirku.
Wasiirka ayaa doonaya in uu Sweden la mid dhigo wadamada Maraykanka iyo Kanada oo qofka loogu yeero kanadiyaan ama ameerikaan balse Sweden waxaa dadka loogu yeeraa soo galooti (invandrare). Magacaas ayaan xitaa ku harin marka qofku uu qaato dhalashada. Wasiirka ayaa qirtay in aysan Sweden ku guuleysay in ay abuurto guri hooyo.
Qaadashada dhalashada ayaa faaidooyinkeeda leh, mida ugu muhiimsan ee Soomaalidu ay daneeyaan ayaa ah xoriyada safarka ee qofku uu helayo. Balse muhiimadu dhalashadu midaas miyaa? Wasiirku waxa uu doonayaa in qofka loo sameeyo xaflad marka dhalashada uu qaadanayo oo uu dareemo isbedel weyn isla markaana uu dareemo in ay Sweden noqotay dalkiisa hooyo.
Hadaba su’aashu waxay tahay riyada wasiirku ma rumoobi doontaa?
Erik Ullenhag ayaa gudiga cusub ee loo saaray kor u qaadista qiimaha Sweden ka dalbaday in ay soo bandhigaan wadooyinka dadka loogu dhiiri galin karo in ay ku dadaalaan qaadashada dhalashada Sweden oo qofkii dadaal dheeri ah siiya abaal marin looga dhigo baasaboorka.
Haddii ay aniga ila tashan lahaayeen waxaan oron lahaa Soomaalida wadanka sida fiican ula qabsata, ee luuqada barata, shaqaysata waa in laga yareeyaa shuruuda 8 sano ah.
Salaan sare Jimcale iyo dhamaan bahda webka.
Walaahey wax walba oo suura gal ah oo aan ku gaaraayo inaan helo kaliya passportkaas waan sameyn lahaa. Waayo 2sano ayaan joogaa 6sano waa cimri barkiis. Lakin waxaan layaabaa marka aan arko dad qaatey passportka weyn isla markaasna shaqo, wax barasho iyo faa’iido kale midna ku heyn wadanka oo iska jooga. Waxaa jira fursado badan oo ruuxii wax qabsanaya uu aadi karo.
Fadlan inta ila midka ah waxaan ka codsanayaa aan joojino oohinta caruur iyo reer ee aan u dagaalano sidii 5sano naloo ku siin lahaa dhalashada si aan uxorowno.
Mahadsanidiin bahda Somaliska website.
wan idiin salamay dhaman bahda somaliska iyo inta ku xiran ariinkan wa mid wacan oo somalida waxay u qadata in eey ku safran kiliya wax kale kama fiikiran waxay suugan inta wakhtiga ka garayo sharciga weyn kadib safar anigo hadii aan ahaan laha iswedhasha walahay in an siiyan qof somaliya basaboor waayo somalido wa xawayan sweden waxad u tiimaden in aad ku noolatan mise in aad ka bacmuushtartan war waxan suugaya basaboorkii weyna kadib wan sowaregaya ka kaca huurdada oo shaqaysta isgarsiya horamar buulshada ku biira ha xiita aniga waxan ahay somaali wan ku jira dadka xuun ee xawayanka kkkkkkkkkkkkkkkkk manta wan ogahay dad badan aya iga xanaqayo laakiin wa cadiiiiiii xiita jimcale waxa laga yaba in uu masaxo qoralkan
asc bahda somaliska.com iyo dhamaan intakuxiran asc
walaal dadkaan aanlanoolnahay malagayaabo in eeygaaraan heerka mareekanka iyo kenada waa dad xirxiran oo dhaqankoodu yahay aankuxiraado guri intaan bulshada dhexgelilahaay marka isbedel iskadaaye anagiibaaba gurigii nalakuxiray oo hada laqabsanay inaana xitaa soomaali ahaan aana isisoobooqan tusaala ahaan aniga tuulaan gedenahay afar qoos ayaan kudegenahay usuma imaano isma bariino iskamana warqabno
marka riyada wasiirka ee hayiraaca ah waa mid aana ufadhin ee jimcaale hadeg degin oo waxa eeykula tahay waa mid marhore luntay waxaana lumiyay dadkii nagasoo horeeyay inmaanta leeydhaho soocadee soomaalinimadaada waxaa sabab u ah intii nagasoo horeeysay
Waxaan weydiina maamuulka somaliska Jimcaale waxan maqlay in dadka cusub ee hada yimaada sweden ee u badan arbetsförmedlingen ay basaborka weyn ku qaadan karaan 5 sano arintas ma mid jirta mise waa sheeko somali waa mahadsan tahay??
Soomaalida keliya ayaan arintaas ka maqlay sxb. Laanta Socdaalka markii aan waydiiyay waxay dheheen wax iska badalay arintaas ma jirto.
moha ina aweys says:
waa arin lagu farxo hadii ee suurto gasho
waaa muhuiim in dhalsha la qiimeeyo
sida wazirku sheegay waa arin fiican
lk ma suurto gali doontaa waaye su,aashu
a s c rali ahanteyda ani waxa an qaba in an sharud ka dheradsan in 8 sano lasugo dhalashada an la kenin hadi lakenana aytahay sheko ah cunsuri nimo wad maqashen gor dhaweto hadalki ka so yere duqa magalada e maalmo e ahed dhalasho kumelgar ah ha la siyo so galotiga cunsuri nimo herkas garsan bal ka warama shaqada hadi an u talabo waxa jira dad ah beshin o an shaqen karin o dhaqtarkaba u ogalen shaqo dhanka kale e luqada ayadana waxa jira dad yow badan ay ku adagtahay luqada luqadi hoyo ayaba dadbadani qori karin aqri karin na marka shekadi danmark o kale o ahed 10sano jog wadanka kadib 50 sualod ka jawab aya lagu orana wa arin ah cunsuri nimo ah ruxa hadi o noqdo kolafaya wa in lo dira boliska o lagu dhaha caden kaken boliska in adan wadanka wax ah danbi ka galin kadib marki u la imado war qad cadey neyso in u wadanka wax ah danbi ka galin u 8 sana wadanka joge si ah sharci kadib lo ogolada warqada fomka ah e dhalashada lagu xareyo swedan wa nagu maqantahay e dhankeda wanagsan allaha naso xejiyo awalba dhanka midenta e familka dhib naga hesta hadana dhanka dhalashada allah ayan idinka magan galne dhaman galada hadi an nahay muslimiin
January 18, 2012 at 11:46
Ilaahyo maan 40 sano joogo waligay ma rabo ina swedish la igu yeedho.Dad aan isku deen, af iyo dhaqan toona aheyn.I’m somali now and forever.
Wad salamantihin dhamantin. Intas kadib. Horta arinta pasportka la sugi la,yahay lama yaabayo coz waxan nahay reer guura ama dad ka helo safarka. Marka u fiirsadayna safarada an safreno muhim mahan intoda badan.waxan dhihi laha an shaqesano bulshoyinka an dhexgalno waxna barano. Anago dhaqankena iyo diintena ku dhagan kadib pasport waxbo mahan isaga iska imanayo marka pasport bas ah yan laga dhigin sababaha an uso haajirnay anka faa,idaysano fursadaha na hor yaalo.8sano pasport ma sugi karo maxa waye waxbaro secondry bilow kadib jamacad ku xiji markas 8sano waxay noqone waqti yar.marka waxyalo badan ba naga khaldan aan isa saxno.mahadsanidin dhamantin.
Passport iyo balaayo ayay ka fikirayaan war
Wadankaan wax ka barta chance ayaad heesataan
Ee luqada barta bisinka!!!!
kkkkkkkkkkk oo hadii aan heesto dhalashadooda ma waxay i modeen inaan ahay iswedhish sweden dan ayaa i keentay uun waligeey waxan ahay somali waana ku faraxsanahay inaan ahay somali alxamdulillah
January 18, 2012 at 15:43
Baasaboorka ha isku nashquulininee inta aad sugeysaaan baasaboor.weyn.soo wakhti idinkuma socda waa su aalle oo la idinkama bahna afkii inaad barataan wadan dhan basaborkisi dhalashada ah. Swidhish.labo kalmadood oo swedhish ah garanmaysan waa ceeb kakaca hurdada oo lookaaladaan badan oo turubka kuligood waxey noo faaiideeyaan jirin haddaan dhalinyaro nahay oo odayashan quxuubka fadhi kudirirka qabilka kuhaya naga daya dadkinaan waa weyn
Wadankaan jaanisyo badan la idin siiyay wax kabarta waxbarasho lacag la aan ah haysattaane waxaa idinka mustaqbal fiican kuwa africa joogga oo india iyo malaysia lagu biilo jaamamcado kaga soo baxaya idinkii yurub joogeyna 00 baasaborka wakhtigiisa waa imaan waxbarasho
Alloow Dalkeena Noo Nabdeey , Qaxootinimo iyo Qurbaawinimo waa Qaxare.
Somalaay Salka Inaad Ka Guurtiyo ,
Qaxbay Kugu Sargoyeene.
(Inaad Silac Ku Noolaatayay Wada Saxiixeenee.
Qaxootigu sasabo weye , iyo sir iyo Qoorlaabee.)
Maanta silax iyo waxaan ku noolnahay , kala daadsanaan , iyo bahdil.
Boholuhu sayn saabiye , wuxuu siriq maleegaayo.
Saldheertohoo , Meel Fog baa Laga Sanceeyaa ee.
Ciidaan Siman Inuu Dib u Saldhigo Waa Siduu Rabayee,
Somalaay Hadmaa Kici Ragbaa Sahayday Ciidiiye.
2 Dhacdo oo igu dhacday –
Xagaagii=sommar-kii hadda lasoo dhaafay ayaa anigiyo saaxiibkeey oo wada socono , nin baaskiil wata oo Swedhish ah , Candhuuf indha nooga tufay!!! Saaxiibkeey wuu xanaaqay , aniguse ma Xanaaqin candhuuftii ayaan iska tiray uun , waxaana iri , 2 Wado ayaa Noo Furan ee Ha Xanaaqin.
1: Inaan isaga Tagno Dalkaan , oo Dalkeenii aadno isagaan waxa na Cunsuriyaynaa jirine.
2. Ama aan u Adkaysano , Yasmadiyo , cunsuriyada .
Bishaan Horaanteedii , anigoo Maktabada-Bibloteka kasoo baxay , waxaan horay u soo maray BOKIA , dukaanka buugaagta , waan kasoo baxay , markaan sidaa uga soo baxay ayaan , indha ku qabtay Wiil Soomaali ah iyo Nin Swedhish ah oo isku qaylinaa , welibana Ninka Swedhishka ah ayaa , Dandaansanaayay wiilka , aad ayuuna ugu qaylinaayay , wuxuuna ku dhawaaqayay , ERAYO CUNSURINIMO ah , sida – Jävla Neger , Helvete , Din Jävla Svart, osv. AAAD iyo AAD ayuuna ugu qaylinaayay , wiilkana ma aqoonin swedhish balse erayo ayuu isku difaacayay aan badnayn .
AQRTOOW (OGAAW meesha arintu ka dhacee waa BANK hortii , Xitaa Shaqaalaha Bank-giga way arkaayeen arinta ,
iyo dadka macaamiisha ah )
Anigu waan aqaan luuqada , anigoo deg degaa ayaan maagay kala dhexgal , isla markii aan goobta soo istaagay , ayaan ku iri yarkii Swedhishka ahaa , Vad vill du ? balse aniga ayuu igala soo dul dhacay intii uu xanaaqi karay oo dhan , waan carooday , waxaana lasoo baxay Mobilkayga anigoo doonayay inaan POLIS-ka ugu yeero , balse Feer ayuu iiga dhuftay Garab bidix , weliba gacanta Mindi yar ayaa ugu laabneed Allaah s.w.t ayaase iaga badbaadshay , gacantiisa iska qabaan maagay ,wiilkii ayaana igu yiri saaxiiboow MINDI AYUU HAYSTAA II ISKA JIR.
Mindiyaha yar yar ee la is dhex geliyo ayuu haystay .
Ninkii markii danbe waa naga tegay isagoo afka ka Ubrinaa , anigana Argagax iyo sas ayaa igu dhacay markaan arkay sida uu mindida iigu sigay.
Xitaa waxaan gaaray inaan qof walba oo cad ka baqo , Balse isla maalintii ayay cabsidii iga ba’day haddana , saas oo ay tahay isma siisan DALKAAN –
DAL AADAN LAHAYN DARAYN KU JOOG –
Soomaaliyeey Pass gaduuda qaado aam ha qaadan , Qaxooti ayaa tahay , Wadankaaga ayaana Qaxootinimo iyo Cusnuriyad uga bixi kartaa , isaga aan ku dadaalno namdayntiisa .
January 18, 2012 at 17:26
Buufis+buufis maxaan baasaboorkooda sugnaa kuwaaan timaha cad waa ku qaldanay imaatinka wadankooda bal iska dhaaf waxaan kala gooyaan caruurtii iyo waalidkood kuwo maaha kuwaan waa kuwo aan aqoon sida dadka loola dhaqmo oo xataa barnaamij shaqo loo abuuro mid bulshadeed. bal xagge lagu arkey qof asagiina sharci la siiyey iyo waxuu ku noolaado taas bes ayey ku mahadsan yihiin Allaa mahada koowaad leh ee asagana caruurtiisii iyo eheladii kale loo diidayo sida xaaskiisii amaba ninkeedii inkastoo ay jiraan qaladaad badan oo dhankeena ka yimid hadaan nahay Soomaali.
salaam ka dib mashaa alaah calayk Jicmaalle waa kuugu raacsanahay fikirkaaga qiimiga leh. waan dhihi lahaa arintaas iyo wax ka badan, lakiin marka la gaari ka hadlkeeda ayaan dhihi doonaa wax kale inshaa alaah. waad mahadsan tihiin Somaliyeey adinkana is jeclaada oo is cafiya iska daaya qabiilka iyo wax inoo diiiday dadnimadeena, oo aan uga harnay aduunka.
dowlada sweden wey xaqiirtay dadka somalida ,,maxa yelay dadka nalamid ah wexey kuu qataan 5 sano pasaporka marka maxan ugu duwan nahay dadkas wexey kuu dhahayaan somalida aqonsi mawataan markey isdhiwayan hada sharciga waan kusinay waxan ku sinay bini adan nimo mar adoo shegtay inaat katimid somalia oo hada qofka kuu tar jumayey u ahaa qof somali ah marka hadey cadatay inan ahay somalia mexey tahay aqoonsiga ay naga rawan intas kadib , aniga waxan dhihii lahaa ariintan wax halaga qabto waa no muhiin inan laa sin nano dadka kalee
waxaa aaminsanahay in ay somalidu xaqirantahay marga laga hadlayo wadankaan ha ahaato dhalsho ama midakalab oo ah in aysan haysan waxtix galin ah oo ummadahakale eesoogalootigaa ayhaystaa waxay iskudayeen xataa swidhashka qaarkii in ay badalaan kalmada ah ajnabi oo ay kubadalaan swidhaka cusub am ny svenska taasna ilaahad laguma guulaysan marka wasoo dhawaynaynaa hadii waxlaga badalayo. waana in aynoqdaan wax waxtar uleh umada sogalootigaa tas macnaheedu waxaytahay wa in lagabadalo 8 sanaso oo somalida un laguxujeeyay lagana dhigo 3ama 4 ugubadnan 5 sano
asc dhaman somalida marka hore fikradeyda aniga basaborka iswedhka
hada haysato iyo firiim waa isku mid maxa yeley manta hadan rerkeyga hadan cudsado manta male kenayo sabato ah somali ayan ahaye caden aya laiga rabaa ilahey wadankena nabad noga dhig barafkan wan katageyna
ilahey hano fududeyo adoyadan safar ayan ku nahaye ilahey hano naxariisto amiin no dhaha
Hasssan Farah says:
Arintaas wasiirka waa arin wanaagsan laakiin sweden arintaas in aaysan ka hir geleeyn waa wax iska cad marka soomaalida 8 deeda sano ha iska ga ii maasato ceeyrtoodana ha iska qaa taan!!